Imiklomelo – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
1. Indondo yeGolide – inkampani yonyaka – Kubaphathi bezezimali
2. Indondo yeBronze – Inkampani enewebsite ehlaba umxhwele – Kubaphathi bezezimali.
3. Indondo yeBronze – Inkampani yonyaka enezethulo ezintsha zomxhumanisi wompakathi (PR) – kubaphathi bezezimali.
4. Indondo yeBronze – IMobile Application (APP) yeNJMPF – Kubaphathi bezezimali.
Umncintiswano wamaStevie Awards anohla lemiklomelo ehlukaniswe ngezigaba eziyisikhombisa: Okuyi Asia-Pacific Stevie Awards, iGerman Stevie Awards, i-American Business Awards, i-The International Business Awards, i-The Stevie Awards for Women in Business, i-The Award for Great Employer kanye neThe Stevie Awards for sale and Customer Service. Umncintiswano wamaStevie Awards uthola iziphakamiso ezingaphezulu kuka-10 000 ngonyaka umunye ezivela ezimbonini zezizwe ezingaphezu kwamashumi ayisithupha. Lomncintiswano uklomelisa izimboni zalolonke uhlobo, zabobonke osayizi, nabantu abazimele, iStevie ihlonza izinga lokwenzaka ezindaweni zokusebenzela emhlabeni wonke.
I-The International Business Awards uhlelo lokuklomelisa kwezamabhizinisi olusezingeni eliphezulu kumhlaba wonke jikelele. Bonke abantu, zonke izimboni emhlabeni jikelele – abasebenzela umphakathi nabazimele, abenza inzuzo nabangenzinzuzo bonke bafanelekile ukuletha iziphakamiso zabo zalabo ababakhethayo. I-IBA yangonyaka ka-2017 yathola izizwe ezingaphezulu kwamashumi amathathu namazwe ahlukahlukene.
Igama lesidlaliso elithi Stevies, limele igama lesiGreek elithi “crowned”, imiklomelo iyonikezelwa kulabo abawinile kwiGala Award Banquet eyobe iseHhotela eBarcelona, eSpain ngo-Octoba mhlaka 21.
Sekutholakale inani elifikelela ku-3 900 labaphakanyiselwe ukukhethwa elivela ezimbonini ezahlukene zabobonke osayizi kuzozonke izinhlobo zezindima, kuhlanganisa iCompany of the year, iMarketing Campain of the year, iBest New Product or Services of the year, iStartup of the year, iCorporate Social Responsibility Program of the Year, kanye ne-Executive of the year, phakathi kokunye.
Bonke abaphumelele ukuwina imiklomelo yeStevie Award bahlonzwa abaphathi abasezingeni eliphezulu bezimboni abangaphezu kwamakhulu amabili emhlabeni wonke jikelele ababambiqhaza ezimbonini ezingu-12.
“Abehluleli be-IBA abavela emhlabeni wonke jikelele bazithakasisele iziphakamiso abazibuyekeze kulonyaka zokukhetha abangase bewine. Ngokusebenzisa izinga lokuzikhandla lalabo abaphakanyisiwe abavela ezizweni izilinganiselwa ku-60, iStevie Awards iyazigqaja ngokuhlonipha izimboni ezikhombisa izinga eliphezulu lokuzikhandlela izimpumelelo abazihlosile kuzozonke izinhlobo zezimboni”, kusho uMichael Gallagher, uMongameli nophinde abe umsunguli weStevie Awards. “Sikuthakasele ukwazisa ngezindaba ezifana nalezi kubobonke abantu emhlabeni jikelele ezinyangeni ezizayo, sisebenzisa izinsiza kuxhumana nezinkudla zokuxhumana zeStevie Awards ngethemba lokukhuthaza abanye ukuthi benze kahle kakhulu emisebenzini yabo.
Imiklomelo iSTD Bank KZN Top Business Awards
Ngomhlaka-03 Agasti 2017, INJMPF yaklonyeliswa ngendondo yokuphatha kahle izimali onyakeni ka-2017, iBest Financial Services, iklonyeliswa iKZN Top Business Awards 2017.
Eminyakeni engu-19 eyedlule iKwaZulul-Natal (KZN) Top Business Awards isigqugquzele izimboni nabatshalimali ababambe iqhaza ekwenzeni isifundazwe siqhubeke sibe nempumelelo. Uhlelo lwemiklomelo seluziveze njengabaqhakambisi bezimboni zaseKZN baphinde begubhe izimpumelelo zezimboni ezenza kahle esifundazweni iKZN. Leyonaleyo ndondo engumklomelo imele ukuklomelisa lonke uhlobo lwemboni ebambe iqhaza emnothweni, imboni ezimele noma esebenzela umphakathi.
Imiklomelo yomphathi omkhulu i-European CEO Awards
Ngo-Agasti 2017, uMphathi omkhulu iCEO/Principal Officer uklonyeliswe ngendondo yomphathi omkhulu owenza kahle iBest CEO, eklonyeliswa endimeni yezezikhwama eNingizimu Afrikha eklonyeliswa iEuropean CEO Media Group. Lendondo emhlabeni uwonke jikelele isho ukuthi ubuholi obuqotho nesiko lokuhola lisetshenziswa njengoba kulendelekile esikhwameni iNJMPF. Lokhu kusho impumelelo enkulu kuMnu. Sam Camilleri nasesikhwameni iNJMPF nasesifundazweni iKZN.
Indondo i-European CEO iphosela inselelo zonke izimboni ezikhona ekwenzeni umsebenzi wazo kanye nabaphathi abenza izimboni zibe nempumelelo. Ngaphandle kokuholwa nokugqugquzelwa, kungashabalala ngisho isiphiwo esihle sokwenza umsebenzi. Ezimbonini ezincane nezinkulu lokhu kuboniswa phambili umphathi omkhulu i-CEO okuyena obhekelele ukugcinwa kwesikompilo lemboni.
Ukuklonyeliswa ngendondo kuwumphumela wokwenza izinto kahle ngendlela efanele.
Isikhwama iNJMPF isihlonzwe i-Institute of Retirement Funds Africa (IRFA) kanye noMkhandlu wezoMhlalaphansi eNingizimu Afrikha, iCouncil for Retirement Funds in South Africa (Bastesta) nabatshalimali i-Africa Investor (Ai), iCFI, iThe-European kanye neWorld Pension Summit Innovation Awards njengesikhwama esenza kahle.
INatal Joint Municipal Pension/Provident Funds (NJMPF) ibahola phambili ozakwabo kwindima yabo. Isithole ukuhlonishwa okukhulu ngokwenza kahle ngokungakhathali, emikhakheni ekubalwa kuyo, ubuholini obuqotho, nezindlela ezilula nezinhle zokuxhumana, nesineke sokuqeqesha nokufundisa, nokuphatha kahle amalunga, notshalomali oluhle. Sekube iminyaka eminingi iNJMPF ithola izindondo, zangaphakathi ezweni nezisezingeni lomhlaba zokwenza kahle embonini. Lokhu okulandelayo kubonisa kafushane izindondo ezingaphezu kwamashumi amabili eseziklonyeliswe iNJMPF, isikhwama ongazikhethela sona KwaZulu-Natal.
Ezamabhange nezezimali zase-Europe (European Banking and Finance) ziyisizinda esiphethe abaphathi abaphezulu nabanohlonze kanye nabathathi bezinqumo ezisemqoka emhlabeni wonke jikelele. I-European ingumlingani wangasese weThomson Reuters ophinde abe umcosheli wezindaba zabaphathi abasezingeni eliphezulu, abasilethela idlela yomqondo owodwa wokusebenza wabaphathi abahlonishwayo besikhathi samanje. Ezamabhange nezezimali zase-Europe (European Bank and Finance) sebeklomelise iNJMPF lezizindondo ezilandelayo;
Indondo yesikhwama sonyaka ka-2016 esenze kahle (iBest Perfoming Pension Fund Of The Year – South Africa 2016).
Igama lendondo okwaklonyeliswe ngayo iNJMPF ikuveza ngokusobala lokhu abayikho. Ezweni lonke nasemhlabeni wonke jikelele, iNJMPF isizenzele igama elihle ngokwenza umsebenzi njengoba kulindelekile osezingeni eliphezulu, lokho sekuphenduke kwaba isikompilo lesikhwama. INJMPF iphila iphupho layo lokunikezela ngosizo lwemihlomulo olusezingeni eliphezulu emalungeni esikhwama, nabahlomulayo kanye nabahola impesheni. Ngokomlandu enawo iNJMPF embonini, isibekwe phambili ukuze idlale indima yokuhola embonini yezomhlalaphansi eNingizimu Afrikha.
Isikhwama sesiphinde sakhethwa abaseEurope emcimbini wemiklomelo wezamaBhange nokuphathwa kwezezimali, iBanking & Finance Awards, wonyaka ka-2017, sakhethelwa ezindimeni zalemiklomelo elandelayo.
Isikwama sonyaka esenze kahle – ENingizimu Afrikha ngonyaka ka-2017
uMnu. Sam Camilleri – umphathi omkhulu wezezimali iFinancial CEO, yonyaka eNingizimu Afrikha 2017
Abemiklomelo yezamaBhange nokuphathwa kwezezimali kwizwekazi i-Europe bahlonza izimboni kanye nabantu abaphumaphambili ngokwenzakahle kunabanye baphinde beqhubezele imboni yabo phambili nokwenza kahle. Bonke abenza kahle bahlonzwa ngobuholi obuqotho, ukuletha izinto ezintsha, ukuba nolwazi lokusebenza, nomkhiqizo osezingeni eliphezulu.
Indondo yezethulo ezinstha emhlabeni wonkana, iGlobal Innovation Awards
Ngo-Okthoba 2017, isikhwama besithamele umhlangano wemiklomelo weGlobal Innovation Awards lapho kwenzelwa khona imihlangano yezezimpesheni zomhlaba wonke iWorld Pension Summit. Isikhwama sahlonzwa endimeni ye – “Plan Design” emcintiswaneni obungelula osezingeni lomhlaba. Uhlelo lwe-Innovation Awards lugxile kakhulu ezikhwameni ezisebenzisa izinhlelo ezintsha ukwenza umsebenzi wazo njengezikhwama zempesheni nokukhulisa imboni. Lomcimbi wemiklomelo ububanjelwe eHague, eNetherlands.
Abezezimpesheni notshalomali emhlabeni wonke babambe umhlangano wabo wesikhombisa mhlaka-9 nangomhlaka-10 kuNovember wonyaka ka-2016, eHague eNetherlands. Lomhlangano owehlukile kuneminye ohlanganisa bonke ongoti abaqeqeshelwe ezezimpesheni, abaphathi bezimpahla nezinsizakusebenza abavela emhlabeni wonke, ukuzocobelelana ngezindlela zokunikezela ngosizo olwanele oludingwa ilabo ababambe iqhaza ezikhwameni. Umongo womhlangano wawugxile ekunciphiseni ubungozi obungabakhona ezikhwameni.
Njengengxenye yomcimbi wemiklomelo owawubanjwe mhlaka-10 November ukuhlonipha iqhaza labo lokukhulisa amasu abo okususebenza. Uhlelo lwe-Innovation Awards lugxile kakhulu ezikhwameni ezisebenzisa izinhlelo ezintsha ukwenza umsebenzi wazo njengezikhwama zempesheni nokukhulisa imboni.
Sinentokozo yokumemezela ukuthi isikhwama iNatal Joint Municipal Pension/Provident Funds (NJMPF) yaphumaphambili njesikhwama esenza kahle kakhulu ekuletheni izinhlelo ezintsha zokusebenza ezindondweni ezilandelayo; kwezoKuxhumana (Communication), uTshalomali (Investments) kanye nezindlela ezintsha zobuchwepheshe bamanje (Technology Innovation). Ukumenyezelwa ngokukhethekile kweNJMPF emncimbini wemiklomelo kulandela ukuthi iNJMPF ikhuphule izinga ezindimeni zemiklomelo elandelayo;
– Ekwethuleni izinhlelo ezintsha zolwazi lwezezimali, (Introducing a financial literacy program),
– Ezinhlelweni ezifundisa amalunga ekuthuthukiseni indlela enhle yokutshala imali esikhwameni.
– Ekujwayezeni amalunga ubuchwepheshe besimanje
INJMPF ihlonzwe njengesikhwama esenza kahle ngendlela engaphezu kwelindelekile! Lokho kungumphumela omuhle endimeni yezomhlalaphansi eNingizimu Afrikha nasezwenikazi i-Afrikha yonkana, ngoba lokho kubonisa ukuthi izikhwama zase-Afrikha kukhona into efanele eziyenza kahle.
Abatshalimali base-Afrikha (African Investors)
NgoSepthemba 2017, isikhwama sakho simenyezelwe njengesikhwama esiphume phambili saklonyeliswa ngendondo i-Africa Investor (Ai) Award eNew York – USA, lena yindondo yomtshalimali owenzakahle e-Afrika yonkana. Isikhwama iNJMPF isiklonyeliswe ngalendondo kwaze kwaba kathathu iminyaka ilandelana. Lokhu kusinikeza ubufakazi bokuthi sikhuphule izinga njesikhwama ekuletheni izidingo zomhlalaphansi kubabambiqhaza esikhwameni. I-Africa Investor (Ai) umtshalimali ohambaphambili emhlabeni wonkana nabenzakahle kwezokuxhumana. Abanye abaxhase i-Africa Investor (Ai) kubalwa iNew York Stock Exchange, iWorld Bank, iThompson Reuters, i-Office of the Special Advisor on Africa kanye neWorld Pension Council. Inhloso enkulu yalemiklomelo ukwakha umlando omuhle wezimpulelo ezimakethe zase-Afrikha emphakathini wezotshalomali osezingeni lomhlaba. Lokhu kuyimpumelelo enkulu esikhwameni iNJMPF, naKwaZulu-Natal kanye naseNingizimu Afrikha yonkana.
Ukuhlonzwa kweNJMPF okusezingeni lomhlaba
Ngomhlaka 19 Septemba 2016 uMnu. Sam Camilleri ongumphathi omkhulu iCEO/Principal Officer waseNJMPF waklonyeliswa ngendondo yomphathi owenzekahle kwezotshalomali e-Afrkha yonkana emcimbini wabatshalimali baseAfrikha i-Africa Investor Summit eNew York. uMtshalimali wase-Afrikha (Africa Investor) uyena ohola phambili kwezotshalomali nezokuxhumana okusezingeni lomhlaba. Abanye babaxhasi ababekhona kulomcimbi kubalwa iNew York Stock Exchange, iNasdaq, iNepad, iWorld Bank, iThompson Reuters, i-Office of the Special Advisor on Africa kanye neWorld Pension Council. Inhloso enkulu yalemiklomelo ukwakha umlando omuhle wezimpulelo ezimakethe zase-Afrikha emphakathini wezotshalomali osezingeni lomhlaba. INJMPF ilokhu iqhubeke njalo nokubeka phambili labo abangamalunga esikhwama nalabo abahola impesheni esikhwamni ngezinsizakusebenza ezinhle nemihlomulo yabo ehambisana nezikhwama zempesheni zangaphakathi ezweni kanye nezisezingeni lomhlaba. Ukuphumelela okusezingeni lomhlaba kugqugquzela INJMPF ukuthi iqhubeke nokwenza kahle embonini yezomhlalaphansi. Ukuklonyeliswa ngendondo kungumphumela wokwenza kahle into efanele. Lendondo yakamumva etholwe iNJMPF izokwandisa esibalweni sezindondo ezingu-25 eseziklonyeliswe iNJMPF iphinde ibe impumelelo enkulu kuMnu. Sam Camilleri, naKwaZulu-Natal kanye naseNingizimu Afrikha yonkana. INJMPF ilokhu isebenze njalo ngokulandela isiqubulo sayo esithi “Superior Retirement services and benefits for members and Pensioners!” okungukuthi “usizo lwezomhlalaphansi nabahola impesheni olusezingeni eliphezulu”.
Indondo iSpecial Award.
INJMPF isikhuphule kakhulu izinga layo lokusebenza, yaqinisa nemigomo esebenza ngaphansi kwayo ukuze ikwazi ukuhambisana nalokho okufunwa amalunga esikhwama, i-IRFA isiklomelise i-NJMPF ngesitifiketi iMerit Certificate for Excellent in Alignment of Previously Disadvantaged Fund to the Previously advantaged Fund in 2015, okuyisitifiketi esimataniswa nesikhwama esasikade singathuthukile ngendlela esezingeni elifanene uma siqhathaniswa nesikhwama esasithuthuke ngendlela efanele ngonyaka ka-2015. Lomklomelo ubonisa ukwenzakahle kwesikwama ekunciphiseni ubuthakathaka obebukhona esikhwameni.
Umklomelo wonyaka i-Africa Pension Fund Initiative of the year Award.
INJMPF yamenyezelwa njengesikhwama esiphume phambili kwi-Afrikha Pension Fund Initiative of the year, okuwumklomelo oklonyeliswe isikhwama sonyaka esisebenze ngokuzimisela nangokwenza kahle kakhulu maqondana nalowonyaka, lomklomelo ubuqondaniswa notshalomali lwangonyaka ka-2015. Imiklomelo ithathelwa emisebenzini eyahlukene yezokusebenza lwabatshalimali base-Afrikha leyomisebenzi yezotshalomali iyona okuhloswengayo ukuhlonza izimboni ezenza kahle endimeni yezotshalomali, ezimbonini zohwebo, amabhange otshalomali, abaphathi bezimboni, abalawuli ngokwezemithetho.
Imiklomelo yayinikezelwa emcimbini wazwelonke ohamba phambili wemboni yezotshalomali nezokuxhumana i-Africa Investor Summit ngo Septhemba ka-2015, nokuwumcimbi owehlukile nokhethekile ezimakethe ezinkulu zase-Afrikha. Abanye babaxhasi ababekhona kulomcimbi kubalwa iNew York Stock Exchange, iNasdaq, iNepad, iWorld Bank, iThompson Reuters, i-Office of the Special Advisor on Africa kanye neWorld Pension Council.